dayniile » Wasaaradda Isgaarsiinta oo ka hadashay qorshayaasha looga gaashaaman karo cilladaha internet-ka
Bambo gacmeed caawa lagu weeraray xarunta degmada Waaberi
Sami Khedira oo lagu jeesjeesay
Booliiska Hindiya oo raalli galin ka bixiyey nin si xun loo dilay
Cayaaryahan caan ah oo musqulaha dhaqi jiray
Mashiin isagoon lala ogayn nin shaqada ka tiray
Wasaaradda Isgaarsiinta oo ka hadashay qorshayaasha looga gaashaaman karo cilladaha internet-ka
(Muqdisho, 17 Luulyo 2017) Dadaal dheer oo ay si wadajir ah u bixiyeen Dawladda Soomaaliya iyo Shirkadda gaarka loo leeyahay ee hirgelisay adeegga Fiber Optic-ga ayaa waxaa lagu guuleystay in dib loo soo celiyo adeeggii internet-ka ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Muddadaas ku dhow 3da toddobaad waxaa dalka soo gaaray khasaare dhaqaale oo taabtay qeybaha kala duwan, sida ganacsiga, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada dawladda.
Haseyeeshee, waxa ay Wasaaradda boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolojiyadda dadaal aan kala go’ lahayn u gashay sidii loo yareyn lahaa khasarahaas, Shirkadda gaarka loo leeyahay ee adeegga gacanta ku haysana looga caawin lahaa xallinta arrintan.
Annaga oo ka faa’iideysaneyna fursaddan, ayaa waxa aynu jecelnahay inaan dhinacyada kala duwan la wadaagno tilmaamaha aan dooneyno in looga gaashaanto dhibaato noocan oo kale ah:
1. In si degdeg ah loo ansixiyo Xeerka Isgaarsiinta Qaranka, kaasoo qeexaya mas’uuliyadaha dhinac kasta. Sharcigu wuxuu dadweynaha siinayaa awood ay magdhaw ku weydiisan karaan haddii shirkadaha ay ka soo bixi waayaan adeeggii ay heshiiska kula galeen.
2. Shirkaddaha Isgaarsiinta iyo adeegyadda Internet-ka waxaa laga doonayaa inay sameyaan qaab xarigga looga ilaalin karo maraakiibta ku soo xiraneysa Dekedda Muqdisho, taasoo u baahan inay isla qorsheeyaan hay’adaha kale ee dawladda ee ay arrintaas khuseyso.
3. Shirkadaha ka shaqeeya internet-ka waxaa la farayaa inay sameystaan khad kale oo keyd ah (backup) si haddii mid cillad ku timaado ay ugu badbaadaan khadka kale.
4. Waxaa ganacsatada lagu baraarujinayaa in ay dalka ka furantahay fursad ganacsi oo ay ku maal-gashan karaan xargo kale. Baahida internet ee sii kordheysa iyo kalsoonida lagu qababa waxay muujinayaan in loo baahan yahay xarko kale.
5. Wasaaradda waxa ay gacanta ku haysaa qorshe qaran oo ay qeyb ka noqon doonaan dhamaan daneeyayaasha isgaarsiinta dalka, kaas oo damaanad qaadi doona helitaanka isgaarsiin tayo leh, la isku halayn karo oo la awoodi karo, kuna baahsan dhammaan dalka oo dhan.
Wasaaraddu waxay ugu dambeyntii shacabka Soomaaliyeed uga mahad celineysaa dulqaadkii ay muujiyeen muddadii uu maqnaa khadka. Waxaana rajeyneynaa in haddii la fuliyo talooyinkaas in laga gaashaaman doono inay soo noqoto cillad noocan oo kale ah.
Bambo gacmeed caawa lagu weeraray xarunta degmada WaaberiJune 22, 2018
Sami Khedira oo lagu jeesjeesayJune 22, 2018
Booliiska Hindiya oo raalli galin ka bixiyey nin si xun loo dilayJune 22, 2018
Cayaaryahan caan ah oo musqulaha dhaqi jirayJune 22, 2018
Mashiin isagoon lala ogayn nin shaqada ka tirayJune 22, 2018
Wadahadalladii nabadda South Sudan oo heshiis lagu gaadhi waayeyJune 22, 2018
Madaxweyne Farmaajo Oo Kulan Gaar Ah La Yeeshay Madaxweynaha South SudanJune 22, 2018
Dalalka Mediterranean-ka ku teedsan oo laga codsaday in ay markab dad soo samato bixiyo samaystaanJune 22, 2018
Dhoofinta Kalluunka Oo Markii Ugu Horeysay Laga Bilaabay KismaayoJune 22, 2018
Xildhibaan Afaraale oo eedeeyay Ciidanka Millitariga SoomaaliyaJune 22, 2018
Deg Deg: RW Xasan Cali Khayre oo Hada Kaso Dagay Garoonka Aadan CadeJune 22, 2018
Warqad xasaasi ah oo ka dhan ah Keating oo uu Muuse Biixi u diray QMJune 22, 2018